Football Khabar » बुन्डेसलिगामा बार्यन म्युनिखको सहज जित
बुन्डेसलिगामा बार्यन म्युनिखको सहज जित
जर्मन लिग बुन्डेसलिगामा बार्यन म्युनिखले सहज जित निकालेको छ । शनिबार राति भएको लिगको २०औं खेलमा बार्यनले मेन्जमाथि १–३ को जित निकाल्यो । बार्यनलाई अवे मैदानमा जिताउन ३ जना खेलाडीले गोल गरे ।
बार्यनले खेलको आठौं मिनेटमा रोवर्ट लेवान्डोस्कीको गोलबाट अग्रता लिएको थियो । त्यसपछि खेलको १४औं मिनेटमा थोमस मुलरले गोल गरेपछि बार्यनले ०–२ को अग्रता बनायो ।
त्यसपछि खेलको २६औं मिनेटमा बार्यनका लागि थियागो अलकान्टाराले गोल गरेर टिमको अग्रता बढाए । तर, पहिलो हाफको ४५औं मिनेटमा जेरमिहा जस्टले गोल गरेर खेल १–३ बनाए । त्यसपछि दोस्रो हाफमा दुवै टोलीबाट गोल नभएपछि बार्यनले १–३ ले खेल जित्यो ।
यो जितसँगै बार्यन लिगको शीर्ष स्थानमा चढेको छ । बार्यनको खातामा २० खेलबाट ४२ अंक छ । तर, आज शनिबार राति नै दोस्रो स्थानको लेइपजिगले आफ्नो २०औं खेल खेल्ने हुँदा यदि सो खेल जिते बार्यन पुनः दोस्रोमै झर्नेछ । तर, लेइपजिग हारे वा बराबरीमा रोकिए शीर्ष स्थानमा बार्यन नै रहनेछ ।
प्रकाशित मिति १८ माघ २०७६, शनिबार २३:१०
नापोली नखेलेको खेलमा युभेन्टसलाई ३–० को जित दिने निर्णय : नापोलीको १ अंक खोसियो
नेसन्स लिगमा आज क्रोएसिया र फ्रान्सको रोमाञ्चक भिडन्त हुँदै
नेसन्स लिग : आज रोनाल्डोबिनाको पोर्चुगल स्वीडेनसँग भिड्दै
विश्वकप छनौट : ब्राजिलको शानदार जितमा नेइमारको ह्याट्रिक
नेसन्स लिग : फ्रान्ससँग ७–१ ले हारेको युक्रेनले स्पेनलाई हरायो !
ला लिगाको उपाधि होडबारे यसो भन्छन् बुस्केट्स
‘रियल मड्रिडले च्याम्पियन्स लिग जित्न हाजार्ड १०० प्रतिशत फिट हुनुपर्छ’
नेसन्स लिग : बेल्जियममाथि इंग्ल्यान्डको कमब्याक जित
रियलबाट खेल्ने पोग्बाको चाहना कहिले पूरा होला ?
७–२ ले हारेपछि क्लोपले भने– ‘यस्तो कुरा हामीलाई सुहाउँदैन’